चाडपर्वहरुका तरंग | दिशानिर्देश कञ्चन साप्ताहिक
दशैं, तिहार, छठ यो भन्दा पहिले तीज, गौरा लगायतका ठूला पर्वहरुमा शुभकामना दिने औपचारिक परम्परालाई विस्तारित गर्दै प्रिय मानव आत्मज समाजलाई सदाकाल शुभकामना र नमन छ ।
नेपाल हिन्दु राष्ट्र घोषित हुनुपर्दछ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी ओमकार परिवार भएका मुलुकमा किन धर्म निरपेक्ष घोषणा गरी मुल कानून संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था राखिएकोमा विरोधका कमजोर स्वर सुनिने गर्दछन् । संविधान भनेको त मुल कानून हो, यस संग बाझिने कानून समेत स्वतः अमान्य हुन्छन् । ९४ प्रतिशत ओमकार अर्थात् हिन्दु बसोबास गरेको देशमा त्यसका प्रतिनिधिहरुले बनाएका संविधानमा कसरी त्यस्तो व्यवस्था हुन सक्यो ? यसलाई राष्ट्रका नियन्ताहरुले पालन गरेका छन् त ?
ठूला चाडपर्वमा दशैं निमित्त अदालतमा १५ दिन विदा अन्य कार्यालयहरुमा पनि लामै विदा मात्र होइन दशैं खर्च भनेर पेश्की तलब १ महिनाको थप मिल्छ । अब स्वभाविक रुपमा प्रश्न उठ्छ अन्य धर्मका अनुयायीहरुका पनि चाडपर्व हुन्छन् विदा पनि दिने गरिन्छ तर अतिरिक्त तलब त मिल्दैन । त्यस्तै हिन्दुहरुका चाडपर्वमा उहिले राजाले निर्वाह गर्ने भुमिका राष्ट्रपतिबाट निर्वाह भई रहेका छन् ।
दशैं टीका, मन्दिरहरुमा पूजाआजा गरेको देखिन्छ । केही गरी मुस्लिम वा क्रिश्चियन लगायत फरक धर्मावलम्बी शासनमा भए के हुने लगायतका कतिपय विषयको जवाफ मिल्दैन । विहान रेडियो नेपाल खुल्दा शीब स्तुतिबाट प्रारम्भ हुन्छ । कुरानका आयातका बाइबलका प्रावधानको उच्चारण सुनिदैन । तीजलाई ऋषि पञ्चमी संग प्रत्यक्ष जोडिन्छ । त्यसमा महिलाहरु पतिको दीर्घायु, असल पतिको कामनाका लागि व्रत बस्ने त्यही ऋषि पञ्चमीका पर्वमा स्त्री रजस्वला दोष निवारण गर्ने पनि कथित हिन्दु मान्यता र शास्त्र छ । यसलाई गैरकानूनी भनि बन्देज लगाएको पनि पाइदैन भने महिनावारी छाउपडीमा अछूत वा अलग रहनु राख्नु फौजदारी अपराध भनी कानून बनिसकेको छ ।
मन्दिरहरुमा रजस्वला भएका बखत निष्फिक्रि गयौं भनेर केही महिला स्वयंलाई क्रान्तिकारी योद्धा सावित गर्ने प्रयास छापामा आए । त्यस्ता प्राणीहरुले मन्दिर संग के नै सरोकार प्रयोजन भएर प्रवेश गरे होलान् ? त्यसको एक मात्र कारण कथित हिन्दु संस्कृति र मान्यताको उपहास सिवाय अरु केही देखिदैन ।
वैवाहिक बलात्कार भनेर मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणीका महलमा आफ्नै श्रीमतीको यौन सम्बन्ध समेत केही अवस्थामा कसुर ठहर भइ सरकारवादी मुद्धा भएर लोग्नेलाई कारागार पठाउन सक्ने क्रान्तिकारी समाज बनाउनेहरुलाई चाडपर्व परम्पराहरु प्रति के नै मतलब रहन्छ ? अरु अतिरिक्त तलब भनि कर्मचारीहरुलाई पेश्की दिएर बाँकी निर्धनहरुमा नराम्रो मानसिकता बन्ने गरेको सहजै अनुभव गर्न सकिन्छ ।
लाखौंका बली देवतादेवीलाई चढाउने कतिपयले स्वयं नखाने, यी चाडपर्व कसका लागि खुसीका समय हुन् ? भ्रष्ट लुटेराहरु जसले अकूत सम्पत्ति कमाएका छन् उनको वैभव प्रदर्शनमा सघाउ पुग्ला तर सीमित आय भएका अनेकौं प्राकृतिक विपदाले ग्रस्त नारकीय जीवन विताइ रहेका आफ्नो मुलुकमा भोकै मर्नबाट बाँच्न दासत्वको नरक बास गर्ने झण्डै एक तिहाइ नेपालीहरुका लागि यी चाडपर्वहरु उल्लाश त के दुर्भाग्यको छाया बन्ने गरेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।
के यस्तो समय पनि आउला कि यी लुटेरा छद्म भेषी ब्वाँसाहरुका लूट, मनमानी, सुकिला लुगा, चिल्ला गाडी र गाला, अगुवा पछुवाको
रवाफ, जनतालाई भेडा रैती मानी जनतन्त्रका नाममा राणाहरुलाई उछिन्नेहरु दण्डित पारिएलान् कि ? आम सर्वसाधारणका नजरमा यी ब्वाँसाहरुको कुनै स्थान छैन । सम्मान होइन तिरस्कारको अनुभुति सहजै देख्न पाइन्छ ।
ऐन कानूनमा भएका व्यवस्था विपरित समाजमा विद्यमान रुढीवादी प्रचलन परम्परा संस्कृतिहरु माथि निषेध गर्न सक्ने ताकत छ ? यदि त्यसो गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन भने प्रगतिवादी पश्चिमवादी, धर्मान्तरणवादी भएर पवित्र राष्ट्र नेपाल भुमिलाई कलंकित पार्ने धृष्टताको दण्ड ढिलो होला तर भुक्तान गर्नै पर्ने छ ।
यी चाडपर्व धेरैजसोका लागि दशा हिनताबोध र दुर्भाग्यका छाया बन्ने गरेका छन् । देखाउनका लागि ऐन कानून बनाउने तर समाजका कथित संस्कृति विपरित गतिमा गइ रहन्छन् भने सामाजिक रुपान्तरण असंभव हुन जान्छ । पितृ कार्य भनेर टी.भी.मा गोकर्णेश्वर गायामा गरेको श्राद्ध भारतको गायामा गरेको श्राद्ध भन्दा १० गुणा बढी फलदायी हुने त्यसका लागि शुल्क तिर्नपर्ने त्रिपुण्डधारी रिखीहरुका आहवान लगायतका गतिविधिले त्यस्ता छद्मभेषीहरुले दण्डित हुने दिनको चिन्ता गर्दा उचित होला ।
जीवनकालमा वृद्धाश्रम लखेट्ने मरेपछि श्राद्ध गर्ने हाम्रै समाजमा परेका काला छाया हुन् । म स्वयं कट्टर हिन्दु संस्कारमा हुर्केको प्राणी हुँ, जातिले ब्राह्मण भएपनि ब्रह्त्व नै नभएपछि हिन्दुत्वको के अर्थ रहला? हिन्दु राष्ट्र नाराले बन्दैन । यसका लागि वास्तविक दर्शनको मर्म आत्मसात गरे स्वतः सामाजिक रुपान्तरण होला । अन्यथा व्यर्थका फजूल खर्चि यज्ञपूजा रिखिहरुलाई भर्ने कामबाट केही उपलब्धि भएको देखिदैन । त्यसैले चाडपर्वहरुले उमंग होइन तरंग उत्पन्न गरी रहन्छ ।
← उहिले नेपालीका शोषक नेपाली थिए आज विदेशी छन्
हलिया मुक्ति र गोरु मुक्तिका समान हालत →